UKUGCWALISA NOKWETHULA IZIDALULI ZABAQASHI
Umqashi kudingeka ukuba alethe isilinganiso esikhombisa imininingwane yesamba Sentela Yomsebenzi [Inhlawulo-Nganzuzo (PAYE)] Intela Yokuthuthukiswa Kwamakhono (i-SDL), Umshwalense Wokungasebenzi (i-UIF) kanye/noma Nomhlomulo Wentela Yabasebenzi (i-ETI) okumonyuliwe noma okubanjiwe kanjalo nemininingwane yeSitifiketi Sentela Somsebenzi [IRP5/T33(a)s] esikhishwe kulowo nyaka wentela.
Isidaluli Somqashi Sanyanga Zonke (EMP201)
Isu-Ngqangi: Baqashi Abafanelekile benazi nje ukuthi ungasifaka isicelo se-ETI lapho wethula i-EMP201? Ukubona ukuhi ufanelekile yini noma ngeminye imininingwane funda kabanzi.
Isamba semali esizomonyulwa noma esizobanjwa ngumqashi kumele sikhokhwe kwa-SARS nyanga zonke, ngokugcwalisa i-EMP201 Isidaluli Sabaqashi Nyanga-zonke. I-EMP201 yisidaluli sokukhokhiwe lapho umqashi eveza khona isamba asikhokhile kanjalo nezabelo ze-PAYE, i-SDL, i-UIF kanye/noma i-ETI. Kuzokuba nenombolonkomba yokukhokha (i-PRN) ezokube isiyenziwe kwi-EMP201, nokuyiyo ezosetshenziselwa ukuxhumanisa inkokhelo kanye nokudalulwa kokukhokha kwe-EMP201 eqondene nakho.
Isu-Ngqangi: Udinga usizo lokugcwalisa eyakho i-EMP201? Cindezela lapha ngeminye imininingwane.
Isidaluli Sokulinganisa KoMqashi (EMP501, EMP601 kanye/kumbe EMP701)
Isu-Ngqangi: Abaqashi kudingeka balethe izilinganiso zabo lungakafiki usuku lokuvala olushicilelwe KuSomqulu kaHulumeni.
Lokhu kuphathelene nokuthi umqashi ahambise Isidaluli Sokulinganisa SoMqashi (i-EMP501) esiqonde kahle, Isitifiketi Sentela Somsebenzi [IRP5/IT3(a)s] okufanelwe silethwe naso uma sikhona, Isidaluli Sokuhoxiswa Kwesitifiketi Sentela salokhu:
Ithuba lesikhashana –nokuyizinyanga eziyisithupha 1 kuNdasa kuya ku-31 kuNcwaba
Ithuba elingangonyaka- nokungunyaka ogcwele 1 kuNdasa kuya ku-28/29 kuNhlolanja
Isitifiketi Sentela Somsebenzi [IRP5/IT3(a)]
Umqashi kumele anike umsebenzi i-IRP5/IT3(a) lapho kukhona imali ezokhokhwa noma ekhokhiwe. I-IRP/1T3(a) iveza isamba somholo okhokhiwe kulowo nyaka obuyekezwayo kanye nesamba sezimali ezibanjiwe.
Isu-Ngqangi: Udinga ukuthola ikhodi yomnyombo wemali?
Last Updated: 05/02/2018 9:46 AM ​